​Puntland: Bandhig ka furmaya Garowe
GAROWE, Puntland- Waxaa lagu wadaa Khamiista 28 July, 2016 in magaalada Garowe caasumadda Puntland uu ka furmo Bandhig Buug ay kasoo qayb gali doonaan qorayaal Somali iyo Ajnabi isugu ku jira kuwaaso madasha la imaan doona kitaab kala duwan oo ay dalka iyo arrimo dunida ku saabsan ka qoreen.
Mas'uuliyiin katirsan dowladda iyo shacabka ku dhaqan magaalo madaxda Puntland ayaa lagu wadaa inay kasoo qayb galaan xilli uu ka qabsoomi doono xarunta Jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Garowe.
Wuxuu socon doonaa ilaa 31 bishadan iyadoo ay iska kaashanayaa Machadka SIDRA iyo maktabad daabacda buugaagta oo la yiraahdo SCANSOM.
Bandhigan ayaa noqonaya noociisa kii ugu horeeyay ee lagu qabto magaalada Garowe halka sannadkii hore uu ka qabsoomay magaalada Muqdisho.
​Madaxweyne Gaas oo furay bandhig buug [Dhagayso]
Puntland 28.07.2016. 14:58
GAROWE, Puntland- Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa maanta daah furay bandhig Carwo buugeed [Garowe International Book Fair] lagusoo bandhigay 572 kitaab oo isugu jira; Farshaxan iyo buugaag ka sheekaynaya suugaanta iyo dhaqanka Somalida kuwaaso ...
​Wasiir Odowaa oo ka hadlay eedaynta Puntland
Soomaliya 15.03.2016. 22:29
​Puntland: Wasiirka Amniga oo ka hadlay xaaladda xeebaha
Puntland 15.03.2016. 14:30
​Puntland: Doonyo kale oo gaaray Garacad gobolka Mudug
Puntland 15.03.2016. 13:40
Puntland: Al-Shabaab oo deegaano kale gaaray
Puntland 15.03.2016. 12:24